Specific okpomọkụ nke mmiri: àgwà na mkpa | Network Meteorology
Otu n’ime ihe ndị gbara ọkpụrụkpụ e ji mee ihe n’ihe ọmụmụ physics na kemistri bụ okpomọkụ a kapịrị ọnụ. Kpọmkwem, ndị kpọmkwem okpomọkụ nke mmiri a na-achọsi ya ike n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nnwale ọ bụla. Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịmata ihe ikpo ọkụ pụtara na ịmara mkpa ọ dị ịmara uru a bara na mmiri.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara otu okpomoku ọkụ mmiri yana mkpa ya.
1 Gịnị bụ kpọmkwem okpomọkụ
2 Nkeji nke ikpo ọkụ nke mmiri
4 Mkpa nke okpomọkụ mmiri a kapịrị ọnụ
Gịnị bụ kpọmkwem okpomọkụ
Maka ihe iji mee ka okpomọkụ ya dịkwuo elu, a chọrọ ume ụfọdụ. A ghaghị inye ike a n'ụdị okpomọkụ. Nke a bụ ihe a maara dị ka ọkụ a kapịrị ọnụ. Aha ọzọ nke ejiri mara ya bụ ike ikpo ọkụ. Ọ bụ uru a na-enye anyị ohere ịkọwa ihe kpatara ngaji osisi nwere ike kpoo nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ karịa ngaji nke uche. Ọ na-akọwakwa ihe mere anyị ji eji ihe ụfọdụ iji nwee ike wuo ụfọdụ ngwa ọrụ na arịa dị ka ojiji a zụlitere inye.
Site na nke a anyị kọwapụtara na physics dị ka ọkụ oke ume nke a ga-ebufe ya na ihe otutu ihe iji mee ka ogo ya di otu ogo. A na-ejikarị ọkụ a kapịrị ọnụ mmiri mee ihe atụ. Nke ahụ bụ, ole ike achọrọ iji nwee ike kpoo mmiri n'otu ogo na ogo ya. Anyị maara na ọ bụrụ na ebufere joule nke ike 4182 na kilogram mmiri nke dị na ime ụlọ, oke mmiri ahụ ga-ebuli ọnọdụ okpomọkụ ya site na otu ogo. Site na nke a anyị nwere ike ịnweta uru na mmiri ọkụ a kapịrị ọnụ bụ 4182 joules kwa kilogram na ogo.
Nkeji nke ikpo ọkụ nke mmiri
Anyị maara na a pụrụ igosipụta ọkụ mmiri pụrụ iche na nkeji dị iche iche. Ọtụtụ mgbe A ga-egosipụta nkeji nke ume, oke na ọnọdụ okpomọkụ iji gosipụta na mkpokọta. Usoro mba nke otu anyị nwere joule kwa kilogram nke bụ oke na kelvin nke bụ okpomọkụ. Na ihe ndi ozo bara uru a ebe obu na eji mmiri oku di iche iche eme ihe dika isi ma obu ntughari maka ihe ndi ozo. Dịka ọmụmaatụ, igwe a kapịrị ọnụ nke ígwè bụ 502 joules kwa kilogram na kelvin. Nke a pụtara na a ga - achọ joule 502 nke ume maka otu kilogram nchara iji bulie ogo ya site na otu kelvin.
Zọ ọzọ iji gosipụta ọkụ ọkụ nke mmiri ma ọ bụ ihe ọzọ dị na nkeji ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịtọ calorie kwa gram na ogo Celsius. Anyị na-emeghachi ihe atụ nke nchara. N'okwu a, okpomọkụ a kapịrị ọnụ ga-abụ calorie 0.12 kwa gram na ogo Celsius. Nke a pụtara na achọrọ kalori 0.12 nke ike n'ụdị okpomọkụ iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ dịkwuo elu site na otu ogo nke gram nchara.
Tupu ịbanye n'ụzọ zuru ezu n'ime ikpo ọkụ nke mmiri kpọmkwem, ọ dị mkpa ịmara nke ọma ihe njirimara ya. Ọ bụ ngwongwo kpụ ọkụ n'ọnụ nke na-adịghị adabere na oke nke ihe ahụ. Nke a pụtara na, agbanyeghị ego ole anyị nwere, otu ike achọrọ iji bulie ogo ya. N'aka nke ọzọ, okpomọkụ a kapịrị ọnụ nwere ike ịdị iche na okpomọkụ dị iche iche. Nke a pụtara na ike ike anyị ga-ebufe iji nwee ike ibuli ọnọdụ okpomọkụ otu ogo abụghị nke a ga-ebufe na ọnọdụ ụlọ nke dị ogo 100 ma ọ bụ ogo 0. Ihe atụ kachasị mma maka nke a bụ ịdabere na okpomọkụ nke ọkụ a kapịrị ọnụ nke mmiri. Anyị na-ahụ na na okpomọkụ dị iche iche ọkụ ọkụ nke mmiri dị iche.
Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ ihe onwunwe nke bekee nwere na nke ahụ o metụtara oke ike ọ na-ewe iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ ya dịkwuo elu. Uzo ozo di omimi nke nwere na mmiri nwere na onwere oku di elu. Nke a pụtara na iji mee ka ọnọdụ okpomọkụ nke mmiri dịkwuo mkpa, ha kwesịrị itinye ọkụ dị ukwuu kwa igwe.
Igwe a kapịrị ọnụ nke mmiri dị iche iche dabere na ma a na-agbanye olu ya mgbe niile ma ọ bụ na-eme ka nrụgide dị mgbe niile. Ihe mgbanwe ndị a setịpụrụ ụkpụrụ ndị ọzọ dabere na ọnọdụ ndị a. Mgbe anyị na-ezo aka na olu nke ihe ahụ anyị na-ezo aka na isochoric okpomọkụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị na-ezo aka na nrụgide na-adịgide adịgide, anyị na-arụtụ aka na ikpo gooni iche. Ọ bụrụ na anyị ga-eme ihe, a na-eme ihe dị iche na nke a mgbe anyị na-arụ ọrụ gas ma ọ bụghị mmiri mmiri.
Mkpa nke okpomọkụ mmiri a kapịrị ọnụ
Anyị maara na n'okpuru ọnọdụ ọnọdụ otu kilogram mmiri chọrọ kilogram 1 ka okpomọkụ ya ga-abawanye 1 ºC, ya bụ, 1 kcal / ° C • kg, nke ya na 4184 J / (K • kg) na sistemụ mba ụwa. Anyị maara na ọkụ a kapịrị ọnụ bụ nke kachasị elu karịa ihe ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na anyị etinye efere mmiri na anwụ zuru oke n'oge ọkọchị, ọ nwere ike ikpo ọkụ ma kpoo ọkụ. Otú ọ dị, Ọ gaghị eme ka ọnọdụ okpomọkụ ya dịkwuo elu iji sie ma ọ bụ sie nsen n'ime ya. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na anyị etinye ogwe igwe igwe, o yikarịrị ka ị gaghị enwe ike ịnara ya ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ ya ga-adị elu nke na ọ ga-agba ọkụ.
Otu mmiri a kapịrị ọnụ bụ n'ihi agbụ hydrogen nke emere site na mmiri. Ọ bụ ụdị mmekọrịta dị n'etiti ụmụ irighiri ihe siri ike nke na ọ chọrọ ike dị ukwuu iji mee ka ha maa jijiji ma mee ka ọnọdụ okpomọkụ ha dịkwuo elu. Njikọ hydrogen dị ike ma ọ na-ewe ike iji mee ka ọ kwaga. Ya mere, idebe mmiri na-esi mmiri ọkụ na-achọ inye ume ume mgbe niile.
A na-ebukwa mkpa ọ nwere na ihu igwe. Eziokwu ahụ bụ na mmiri nwere ikike okpomọkụ a dị elu kwa afọ bụ eziokwu dị omimi ma ọ bụrụ na ọ bụghị a ihe onwunwe dị mkpa nke na-enyere aka ịhazi ihu igwe na ihu igwe n'ozuzu ya. Site na inwe oke okpomọkụ a, anyị maara na nnukwu mmiri nwere ọrụ maka ịhazi oke mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ na mbara ụwa. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ihu igwe nwere ike ọ gaghị enwe otu njirimara dịka anyị maara taa.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere oke mmiri ọkụ na mkpa ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Specific okpomọkụ nke mmiri
Agba nke mbara ala nke mbara igwe